Araraoty ny fihenam-bidy Apple, hatramin'ny 31 martsa 2017 | Avy amin'ny mac aho
Araraoty ny fihenam-bidy Apple, hatramin'ny 31 martsa 2017 izao
Apple efa ela no niloka Mpampifandray USB-C ary izany dia niteraka adihevitra lehibe. Amin'ny lafiny iray, ny marika dia angatahina hanavao sy hanao maivana kokoa ny fitaovana ary tsy misy refy. Fa amin'ny fotoana iray ihany, ireo singa ivelany dia 100% mifanaraka amin'ny fampiasa ao amin'ny Mac.
Fantatr'i Apple fa lafo ny tetezamita, satria tsy maintsy zatra ny fampiasana adaptatera isika. Izany no antony, mangina, tsy misy fifandraisana momba izany, dia naharitra ny fihenan'ny tariby sy adaptatera USB-C, monitor ary kapila mafy hatramin'ny 31 martsa 2017.
Ny fihenam-bidy eo anelanelan'ny 20% sy 40% ary ampiharina amin'ny vokatra samy hafa izy ireo, na Apple na mpanamboatra antoko fahatelo. Tsiahivina fa nanatanteraka ity fepetra ity i Apple tamin'ity hafatra manaraka ity:
Aleo tadidintsika fa maro ny mpampiasa, indrindra ny matihanina, manana solosaina maro misy mpampitohy amin'izao fotoana izao ary miatrika tetezamita ... Tianay ny hanampy azy ireo hifindra amin'ny teknolojia farany, ary koa hanafaingana ny fitomboan'ity tontolo iainana vaovao ity
Amin'io lafiny io dia tsy maintsy ataontsika ny fitadidiana: ny mpampitohy USB-C dia fenitry ny marika marobe, mamela ny fampitana vaovao hatramin'ny 10Gb isan-tsegondra, raha toa ka mitovy ny simetrika ny fitaovana sy ny fifandraisana.
Amin'ny lafiny iray hafa, Apple dia manaiky baiko manomboka anio ho an'ny LG Ultrafine 5K monitor miaraka amin'ny fihenam-bidy lehibe, amin'izao fotoana izao amin'ny vidiny € 1049,00. Ity monitor 27-inch ity dia ho azo alefa amin'ny 27 na 28 desambra. Fa raha manapa-kevitra ny hahafantatra ny monitor amin'ny olona voalohany ianao, alohan'ny handraisana ny fanapahan-kevitra farany dia azonao atao any amin'ny magazay manomboka ny faha-29 amin'ity volana ity.
Ary farany, ny kapila mafy nahenan'ny Apple hatramin'ny faran'ny volana martsa tamin'ny taona ho avy, dia mifanitsy amin'ireo kapila mampiditra ny MacBook Pro. Iray amin'ireo ampahany vaovao amin'ny fitaovana vaovao io, noho ny fahaizan'ny fampitana angon-drakitra marobe, na dia ny ambany aza dia ny fiakarana be amin'ny vidin'ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Araraoty ny fihenam-bidy Apple, hatramin'ny 31 martsa 2017 izao
Lalao sy fampiharana amidy mandritra ny fotoana voafetra
Ny LG Ultrafine 5K dia azo vidiana ao amin'ny Apple Store an-tserasera